‘पपुलर’ बन्न हतारको निर्णय != भारतीय मात्रै हैन, नेपाली उत्पादनमा पनि जोखिमै जोखिम - Baikalpikkhabar
‘पपुलर’ बन्न हतारको निर्णय != भारतीय मात्रै हैन, नेपाली उत्पादनमा पनि जोखिमै जोखिम
वास्तवमा, तरकारीमा विषादी बहसको अन्तर्य के हो ? विषादीको परीक्षण किन गरियो ? किन जरुरी छ यो ? के सरकार भारतसामु झुकेकै हो त ? आउनुहोस्, विषादीको बहसलाई खोतलखातल गरौं ।अहिले सरकारले विषादी परीक्षण गरेर मात्रै ल्याउन पाउने भनेपनि त्यसका लागि पूर्वाधार तयार गरिसकेको थिएन । हचुवाका भरमा ‘पपुलारिटी’ लिन निर्णय गरेपनि त्यसको व्यवहारिक पक्ष भने अध्ययन गरिएको थिएन ।
असार २४, २०७६/ जनस्तरबाट वाहीवाही र स्याब्यासी पाएको ‘भारतबाट नेपाल आयात हुने फलफूल तथा तरकारीमा विषादीको परीक्षण गर्ने’ सरकारको निर्णय लामो समय टिक्नै सकेन । भारतीय पक्षको औपचारिक प्रतिवादपछि सरकार आफ्नो त्यो निर्णयबाट एकाएक पछि हटेको छ । अस्थायी रुपमा नै सही, सरकारको त्यो पछि हटाइले यतिखेर बजार चर्को रुपमा तातेको छ । कतिपयले त सरकारको त्यो पछि हटाइलाई ‘भारतसामुको लम्पसारवाद’ समेत भन्न भ्याइसकेका छन् ।
मङ्गलबार, २४ असार, २०७६, दिउँसोको ०४:४३ बजे